विदेश पठाउन नयाँ गन्तव्य किन चाहियो ?
कुरो के हो ? सरकारको योजना के छ ? सरकार कुरो एउटा र काम अर्को किन गरिरहेको छ ? बुझ्न कठिन, झन बुझ्यो, झन कठिन देखिदैछ ।
सरकार भन्छ– अव नेपालीले बिदेशीनु पर्दैन । फर्केर आए काम गर्न ऋण सुविधासमेत दिन्छौं । त्यही सरकार वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्य खोजिरहेको छ, कोरिया जापानलाई समेत थप युवालाई रोजगारी देउ न भनेर कोटा थप्न, अवसर दिन हारगुहार गरिरहेको छ । यो दोहोरो चरित्र किन ?
देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकेपछि कि त पार्टीको कार्यकर्ता बनाउने, कार्यकर्तालाई जता पनि लुटिखाने अवसर दिने, कि विदेश पठाइदिने । सरकारको यो गलत नीतिले हरके वर्ष तैयार हुने ५ लाख युवाहरुको आकर्षण नेपालमा गरिखान पाइएन, विदेश नगएर के गर्नु ? भन्ने नै हुनथालेको छ ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम फेल भयो । सरकारले शैक्षिक कर्जा दिन थालेको छ, त्यो पनि नाममात्रको । ऋणभन्दा झमेला बढी हुनथालेको छ । रोजगारी मूलक ठूला उद्योग, व्यापार, व्यवसायको स्थापना हुनै सकेको छैन । वैदेशिक लगानीका लागि स्थिर सरकार आयो के भनेको थियो, सरकार आफै इमानदार हुनसकेन भने माओवादीले बम पड्काएर उधुम मच्चाइदिएको छ ।
युवा कि त माओवादी बिद्रोही बन्न जानुप¥यो, कि त विदेश ? सत्ताधारी पार्टीको कार्यकर्ता नभए बसिखान, टिकिखान पाइने स्थिति छैन । यसैले आमनागरिकमा नैराश्यता बढेको छ । सरकार समयमै सचेत नभए जे पनि हुनसक्छ ।